Ndiri Kuedza Twitter's New Amplification | Martech Zone
Twitter iri kuyedza chirongwa chebeta kushambadzira kwavanowedzera ma tweets I $ 99 pamwedzi uye unosarudza iyo geography pamwe nezvimwe zvinangwa. Ini ndichiri fan weTwitter uye ndinoshamiswa nechipo ichi, saka pandakagamuchira iyo email ichindikumbira kujoina beta ini ndaifanira kuti hongu.
Ini ndaida kugovana dzimwe pfungwa dzakasarudzika kuitira kuti ndikwanise kudzokera kune ino positi ndigoona kuti zvaive sei.
Zvinoenderana neGoogle Analytics, traffic yangu kubva kuTwitter yanyengera kusvika kungodarika zana kushanya pamwedzi. (Yaimbove zviuru).
Ndine 35,800 vateveri pa Twitter uye ini ndawedzera akawanda se 150 vateveri mumwedzi mumwe. Ndine zvinopfuura mazana mashanu zvinotaurwa mumwedzi wakapihwa uye dzinosvika zviuru zvisere zvekushanyirwa.
Saka, ne $ 99 yakashandiswa, ndinotarisira kuwana chiuru chevashanyi mumwedzi unotevera uye kuwedzera kwakanyanya kwevateveri. Tichaona, zvakadaro!
Nei Ndingashandise $ 99 Kuwedzeredza pa Twitter?
Pane zvikonzero zvishoma nei ndakasarudza kuita uyu muyedzo:
I se Twitter. Nguva dzese pandinovhura Twitter, ndinosangana nezvitsva uye zvinonakidza zvinyorwa kubva kuvanhu vandisina kunyatsoita navo. PaFacebook, vanogara vakafanana vanhu. Ndinoda Twitter kukwikwidza uye kurarama. Kunyanya, kana usati wavhura iyo app yeTwitter kwechinguva, ingo svetukira kunotsvaga / tsvaga skrini uye iwe unogara uchiwana chimwe chinhu chinonakidza.
Ndakagara ndataura pamusoro pemakore mashoma apfuura kuti kana Twitter akapomerwa mhosva yeAPI yekuwana, ivo vanogona kubva vazvibvise pachavo varombo emhando bots uye maSPAM maakaunzi. Zvichida uku ndiko kutanga kweizvozvo. Fungidzira dai chete vanhu vakabhadhara $ 99 pamwedzi vaigona kuti manzwi avo anzwike - ndinotenda hurukuro yacho ingave yemhando yepamusoro.
Kunetsekana akati wandei kwandinako nemuedzo uyu:
Kuwanda kwezvikamu zvekusarudza kwaive kushoma. Ini ndaigona kungosarudza bhizinesi uye tekinoroji, pakanga pasina sarudzo yekutengesa. Izvo zvinondinetsa ini kuti ma tweets angu anokwidziridzwa anogona kunge asiri akakodzera kune avo vari kuona akawedzeredzwa ma tweets.
Ini ndaigona chete kumutsa iyo beta pane yangu wega Twitter account kunyangwe iri bhizinesi kushambadzira sarudzo. Ndinoshuva dai Twitter ingadai yandirega ndichizarura account yacho @martech_zone or @dknewmedia, asi havana simba rakakwana kuti vasarudzwe.
Ini ndoda Twitter kuti irarame uye ndinoda kuona makwikwi kuFacebook. Kana iwe uchidavira kuti chirongwa ichi chakaipa, hazvina kunyanyoipa kupfuura Facebook ichikurudzira isu tese kuvaka mapeji edu enharaunda, uye ikozvino kutibhadharisa kuti titore meseji pamberi pavo.
Tarisa uone pano vhiki rega rega uye ini ndichakuzivisa iwe kuti kukura kweTwitter kuri kushanda sei.
Tags: dknewmediamartech_zoneTwittertwitter adstwitter kukurudziratwitter inosimudzira
Mbudzi 7, 2017 na6: 08 PM
Ndiri muchibvumirano chakazara. Ndakagara ndichida Twitter uye ndichiri kuzviita. Izvi zvine mukana!
Ndinovimba wakaudza mazano ako kwavari. Iyo Beta, mushure mezvose. Ndosaka tine maBetas ekuwana mhinduro kune izvo zvinoda kuwedzerwa.
Ndichiri kutumira kune yangu Facebook account uye mapeji, asi inogona kunge iri zuva rinotonhora mugehena ndisati ndamboshandisa chero mari kuFB kushambadzira.
Mbudzi 7, 2017 na6: 11 PM
Ini zvechokwadi ndakaita, Lydia!